देउवाको घात [टिप्पणी]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।
आश्विन २२, २०७८ दुर्गा खनाल
काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् ।
८८ औं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तयार भएका उनले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीको रुपमा भित्र्याए । यो निर्णयको अन्तर्यले विधि,पद्धति, अनि पार्टी भित्र त्याग, इमानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन भएको छ ।
हमाललाई देउवा र कांग्रेसका धेरै नेताहरूले आफ्नै दलको नेता भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनी एक हिसाबले कांग्रेसका नेता पनि हुन् । तर उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश नेताको रुपमा भएको छैन । जानकारहरूको दाबी अनुसार हमालको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश कांग्रेस नेताको रुपमा भन्दा बढी अदालतको प्रतिनिधिको रुपमा भएको छ । किनकी उनी अहिले कांग्रेस नेता भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जेठानको रुपमा चिनिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका छलफलहरूमा हमालको नाम कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिको रुपमा आएको होइन । संसद्को पुनःस्थापना गरी अहिले सत्ता गठबन्धन अनुकुलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुशी बनाउने’ र ‘भाग पुर्‍याउने’ सन्दर्भमा फरक पात्रहरूका नाम आउँदा हमालको ‘इन्ट्री’ भयो ।
संविधानको मर्म जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी दिने भन्ने हो । त्यही मर्मअनुसार संविधानमा सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने परिकल्पना छ । गैरसांसद व्यक्ति छ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्छन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कोही व्यक्ति, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्दा यो प्रावधान आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर देउवाले संविधानको यही छिद्र प्रयोग गरेर गैरसांसदलाई सगौरव मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल गराएका छन् । जसले संविधानको मर्म र भावनामाथि घात गरेको छ । गैरसांसद रहेका हमाललाई अहिले मन्त्री नबनाई नहुने के कारण थियो ? अहिले उनी मन्त्री नहुँदा के बिग्रिन्थ्यो ?
२०५८ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले माओवादी विद्रोहलाई देखाउँदै संकटकाल लगाए । त्यही संकटकाल लम्बाउने विषयमा विवाद हुँदा संसद् नै विघटन गरिदिए । जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने उनको निर्णयको फाइदा राजालाई भयो । राजाले उनलाई हटाए । आन्दोलन चर्किइरहेका बेला फेरि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै राजाको ‘टिके प्रधानमन्त्री’ बने ।
फेरि उनलाई हटाएर राजाले निरंकुश शासन सुरु गरे । देउवा समेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानी आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । विगतमा अक्षमताको पर्याप्त पगरी गुथिसकेकाले यसपटक चाहिँ देउवा 'सुध्रिए' की भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर ८७ दिनको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्‍यो– देउवा अझै 'देउवै' छन् ।
२०७४ सालको चुनावको परिणामले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्र देउवा फेरि फर्किने कुनै सम्भावना थिएन । तर एमाले, माओवादी केन्द्रको शासकीय अक्षमता र कार्यशैलीले घुमिफिरी देउवा सत्तामा आए । देउवालाई सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थ भए पुग्ने रहेछ, शुक्रबार हमालको नियुक्तिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरू मात्र थिएनन् । विधि र पद्धति पक्षधर र संविधानका मर्मबेत्ताहरू सबै यसको विरोध उत्रिए । दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा ठूल्ठूला बहस भए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत विधिको रक्षा गर्न भन्दै सडकमा आए । अदालतको मानहानीको आरोप खेप्दै विधि मिचिएको विरोधमा बोले । कुनै पनि शासकको स्वार्थमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले सडकमा आवाज बुलन्द बनायो । पछि सर्वोच्च अदातलले पनि संविधानको बृहत् व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जोगाइदियो । यो सब कुरा देउवाले बिर्सिए ।
जनप्रतिनिधमूलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर जनप्रतिनिधिमूलुक संस्था र जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गरेका छन् । देउवाको यो अभ्यासले संसद् भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ ।
यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने हल्ला गत सातादेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको थियो । तर दुवै संसद्का कुनै पनि सांसद यसको विरोधमा उत्रिएनन् । यसले पार्टीहरूभित्र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत कति निरिह भन्ने पनि फेरि पुष्टि भएको छ ।
यो प्रकरणमा देउवा मूल पात्र हुन् त्यसैले धेरै प्रश्न उनीमाथि उठेका छन् । तर निमित्त पात्र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरू पनि प्रश्नरहित छैनन् । किनकी देउवाको यो निर्णयलाई लाहाछाप लगाउने भूमिका उनीहरूको पनि छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको गुन तिर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा अदालतका प्रतिनिधिलाई भित्र्याउने हदसम्मको विकृतिको औचित्य सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् ?
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:५१
स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित जनमत बटुलेर शक्तिशाली सत्तामा पुगेका ओली आफ्नै अहम्‌ले साढे तीन वर्षमा सडकमा फर्किएका छन्, समीक्षा गरे उनले धेरै कारण आफैंभित्र पाउनेछन्
असार २९, २०७८ दुर्गा खनाल
काठमाडौँ — २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।
त्यही बहुमतको बलमा २०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप सोमबारबाट सडकमा आइपुगेका छन् ।
उनले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदरमात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गर्‍यो । यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफ्ती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोज्ने ओलीको शासकीय प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको छ । ‘ओलीका कारण संविधान र शासन प्रणाली नै बाटो बिराउने हो कि भन्ने आशंका भइसकेको थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ ।’
स्थिरताको नारा लगाएर जनमत बटुल्दै सत्ताको भर्‍याङ चढेका ओली साढे तीन वर्षमा त्यही भर्‍याङबाट बल्ड्याङ खाँदै सडकमा आइपुग्नुमा एक, दुईमात्र होइन, दर्जनौं घटना जोडिएका छन् । आफ्नै शक्ति, अहम् र स्वेच्छाचारिताको बलमा विधि, पद्धति र शासकीय मूल्य, मान्यतालाई ओलीले नजरअन्दाज गरे, जसको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । ‘केपी ओलीले आफ्नो मूल्यांकन आफैंले बढी गरेजस्तो देखियो, उनको सुरुमा जुन उचाइ बन्यो, त्यसमा अडिन सकेनन्,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘राजनीतिक साइको एनलाइसिस गर्दा थाम्न नसक्ने पगरी पाएपछि त्यो बोझ हुन्छ । केपी ओलीको हकमा पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ ।’
२०७२ सालमा पहिलोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो । संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उनले डटेर सामना गरेका थिए । त्यही बेला पाएको सहानुभूति २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ओलीका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बन्यो तर त्यसरी आर्जित शक्तिको मान र मर्यादा गर्न ओली चुके । जसका कारण ओलीको अहिले जनमतमात्र खस्केको छैन, यतिखेर उनको हातमा सत्ता गुमेको छ, शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । ‘कुनै पनि राजनीतिक यात्रा गर्ने नेताले आफू जिम्मेवारीमा बस्दा तत्कालका फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर चल्नुपर्छ,’ प्राध्यापक खनालले भने, ‘ओलीजीमा त्यो अभाव देखियो ।’
प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले वाम गठबन्धनलाई मिलाएर पार्टी एकता गरे । पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रसँग उनले सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब गरेका थिए । त्यही हिसाबभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँट गरेर चलाउने सहमति पनि थियो । जुन दिनदेखि त्यो सहमति कार्यान्वयन आशंका बढ्न थाल्यो, त्यसपछि ओली र दाहालबीच खटपट बढ्यो ।
२०७५ जेठ १४ मा उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी भएपछि विधिवत् रूपमा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमतको सरकार बनेको थियो । इतिहास पल्टाउने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारपछि पहिलोपल्ट यति धेरै जनमत बोकेको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो तर उनले जनमत र अवसरलाई सदुपयोग गरेनन् ।
ओलीका लागि हरेक मोर्चामा अनुकूलता थिए । जस्तो, उनी करिब दुई तिहाइनिकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष थिए । संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन थियो । आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसमा पनि पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएकाले सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन तर ओलीले सुरुबाटै आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने अभ्यास थाले । मनलाग्दी नियुक्ति गर्न थाले । विभिन्न विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए । मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाए । मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाए ।
प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म उनका लागि अनुकूल संरचना थिए । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका एकल सरकार थिए । ती सरकारमा ओलीनिकट नै चार जना मुख्यमन्त्री थिए । स्थानीय सरकारमा ठूला संख्यामा पार्टीबाट निर्वाचितहरू थिए । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्नका लागि ओलीलाई धेरै अनुकूलता थिए तर उनले केन्द्रबाहेक अरू सरकार नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरे ।
ओलीले आफ्नै शक्ति र अनुकूलता चिनेनन् । आफूमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भूमिका र जिम्मेवारी रहेको ख्याल गरेनन् । बरु उनले पार्टीभित्र आफूलाई प्रश्न गर्ने नेताहरूलाई ठेगान लगाउने योजना बनाउन थाले । त्यही योजनाको मुख्य सुरुवात गत वर्ष वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि भयो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फुटाउन र त्यसका केही नेता आफ्नो पार्टीमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीमा विमति राख्नेहरूलाई हटाउने थियो तर तत्काल विरोध भएपछि उनले अध्यादेश त फिर्ता गरे । त्यसपछि पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा ओलीको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ झन् बढ्न थाल्यो ।
यो बीचमा ओलीले धेरै राजनीतिक कदम उठाए । संविधानले कल्पनै नगरेको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै उनले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बाटो पक्रिए । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था संविधानमा भए पनि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गत पुस ५ मा भंग गरे । सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो निर्णयलाई बदर गर्‍यो । यही प्रकरणसँगै तत्कालीन नेकपामा फुट आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि ओलीले आफ्नो मिसन छाडेनन् । जेठ ८ मा पुनः प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।
संसद्भित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै संविधानका अन्य धाराहरू प्रयोग गरेर सरकारमा लम्बिइरहन खोजे, जसलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ । यो बीचमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सबै संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराए । संसदीय सुनुवाइको मान्यता ख्याल गरेनन् । दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा पनि ओलीले अध्यादेश जारी गरी शासन सञ्चालनको अभ्यास गरे । ओलीका यस्ता कदमलाई सर्वोच्चले बेलाबेलामा सच्याइरहेको छ, जसको पछिल्लो संस्करण सोमबारको फैसला हो ।
सोमबारको फैसलालाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले लोकतन्त्र संसदीय मूल्य, मान्यताको प्रतिकूलता भन्दै व्याख्या गरेका छन् । बालुवाटारमा बसेको एमाले बैठकले पनि अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ तर ओलीलाई यस्तो आपत्ति जनाउने नैतिक आधार कति छ ? किनकि हरेक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना ओलीकै कदमका कारण भइरहेको छ । यो बीचमा उनले जे–जस्ता घटना घटाए, त्यसप्रति इतिहासले प्रश्न गरिरहनेछ ।
प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:४८